Kubvunzana naMaría Oruña, munyori we Sango reMhepo ina | Zvazvino Zvinyorwa
Kubvunzana naMaría Oruña, munyori we Sango reMhepo ina
Mufananidzo: Twitter yaMaría Oruña
Maria Oruña tora imwe mujaho usingamiswe uye chiri chikamu cheboka idzva re vakapenya uye vakabudirira vatema vanyori vanyori izvo zviri kupa mufaro wakawanda kune iyo genre. Sango remhepo ina ibhuku rake idzva, iro raifanirwa kuburitswa mwedzi uno. Iye-akaberekerwa munyori weGalician, kunyange hazvo achiisa zvinyorwa zvake mu Cantabrian mhenderekedzo, ndipei izvi indavhiyu kwaanotiudza zvishoma nezve zvese. Ndinoonga chaizvo nguva yako, kuzvipira uye mutsa.
KUKURUKURA NAMARÍA ORUÑA
Maria Oruña: Ini handirangarire yekutanga bhuku ndakaverenga, asi ndinogona kutaura kuti hudiki hwangu hwanga hwakazara comics: kubva Zipi naZape, achipfuura Mortadelo uye Filemon kumamhanzi ebhuku renyika Walt Disney; uye nyaya zhinji dzine mifananidzo. VaHollisters, nhamba yemabhuku mu Steamboat akateedzana… Ndakaverenga kamwechete pasvondo. Chinhu chekutanga chandakanyora dzaive dzisiri ngano, asi nhetembo. Ndichinazvo, asi zviripo zvakaipa kwazvo.
MO: ndinochida Kumabvazuva kweEdheni naJohn Steinbeck (Ndakaiverenga ichiri diki kwazvo, pamwe neyaBarco de Vapor), kune ese maveketa aibata nawo manzwiro y chiito iro peji rega rega raive.
MO: Geez ndiyo iyo chaiwo mubvunzo haugone kupindura. Ndinovada vazhinji vanyori chaizvo nekuda kwe zvakasiyana kuti ivo, mumwe nemumwe ane hunyanzvi mukati mepanyika yake, kunyangwe iri masikati neusiku. Rimwe zuva ndakaverenga Frankenstein uye ndakatorwa netarenda rakakura re Mary shelley. Ndinovada Pérez Reverte, Pierre Lemaitre, Rosa Montero, Máximo Huerta, Dan Brown, Fred Vargas...
MO: Ndakashamisika, muzuva rayo, ne mavambo uye kutsva de Lisbeth Salander, kubva ku trilogy Mireniyamu rakanyorwa naStieg Larsson. Ini ndinofunga ane hunhu hwakavakwa chaizvo uye thorutamente charismatic.
MO: Handifungi. Ini ndinowanzo nyora, hongu, chete uye chete muhofisi yanguZvakanaka, ini ndakamboita nzendo uye kubvunzurudza kuzvinyora.
MO: Ini ndinonyora mumaawa emwana wangu echikoro uye mune mamwe ese nguva dzakasununguka iyo yandinobvarura kusvika pazuva. Kuverenga, chero nguva zvakanaka. Tisati tadya mangwanani, nhau. Husiku, zvinyorwa.
MO: Ndinofungidzira ese andakaverenga. Ndakagadzira poindi yevavo vese, kunyangwe dai zvaive pachena nezve zvandisingade kuita. Pandakaverengera camilla lackberg Ini ndaifarira kushandisa manzwi maviri uye maviri nguva ndege kunyora nyaya; uye pandakaverenga kusvika Dan Brown Ndakagutsikana nazvo mashiripiti chii chingave chinoshandiswa mamiriro uye chokwadi chaicho chechokwadi kugadzira nyaya.
KU: Mhando dzako dzaunofarira?
MO: Zvinhu zvandinofarira ndizvo zvakanyanya kunetsa. Ini handiverengi purist mhosva dzemanoveli, asi mabhuku e kufara, nhoroondo… Zvese zvakasiyana. Ini ndinoda biographies uye autobiographies.
MO: ndofunga Handikwanise kuzvitauraZvakanaka, izvozvi ndiri kuverenga chaiwo mabhuku ku nyora yangu inotevera inoverengeka. Y Ini handisi kunyora chero chinhu. Ini handinyore kusvikira ndawana de vese zvinhu, uye kuiisa pamwe kunogona kunditora pakati pemwedzi mina nemitanhatu yebasa. Mushure mezvo, ndinonyora zuva nezuva.
MO: Ndinofunga ndizvo zvakaoma nekuti ipapo yakawanda yezvinhu uye yakawanda yakawanda vanyori. Hazvisi nyore kusefa chii chingave chinokwezva yemuverengi kana kuti inyaya dzipi dzine chokwadi chakakosha uye simba rekuzvipira. Zvisinei, Ndinofunga unofanira kuramba: kana chinhu chiri inopenya, mwenje wayo unogumira pakuonekwa kumwe kunhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kubvunzana naMaría Oruña, munyori we Sango reMhepo ina